Global Voices teny Malagasy » Areti-mifindra, Fifandonana Sy Ireo Fotsy Hoditra Mpamonjy: Ny Endrik’i Afrika Nasiana Fanovàna Araka Ny Hollywood · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 17 Desambra 2018 11:18 GMT 1	 · Mpanoratra Lova Rakotomalala Nandika (fr) i Marine Gouraud, Sylvia Aimée
Sokajy: Afrika Mainty, Cote d'Ivoire, Frantsa, Liberia, Madagasikara, Nizeria, R.D. Kongo, Repoblikan'i Afrika Afovoany, Sierra Leone, Fahasalamàna, Fifandraisana iraisam-pirenena, Hafanàm-po nomerika, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Sarimihetsika, Zavakanto & Kolontsaina
Pikantsary tamin'ilay sarimihetsika “Outbreak” na “Fanairana”, tamin'ny taona 1995
Ny fihanaky ny aretina Ebola tao Afrika Andrefana  tsy ela akory izay dia nahafaty olona miisa 712 farahakeliny hatramin'izao , heverina misy anjatony hafa ihany koa maty noho ireo antony ireo. Raha toa mihanaka manerantany ny tahotra ny viriosin'io aretina io, ity krizy ara-pahasalamam-bahoaka tena izy ity dia mampahatsiahy ny krizy sarintsariny notontosaina ho sarimihetsika efa ho 20 taona izay, izay nolalaovin-dry Dustin Hoffman, Rene Russo, Kevin Spacey ary Morgan Freeman, mba tsy hanononana afa-tsy ireo.
Tantarain'ny “Outbreak” ny tantaran'ny viriosy sarintsariny mitovitovy amin'ny Ébola, antsoina hoe Motaba, hita voalohany tany amin'ilay Repoblika demokratika ary ny fomba nataon'ireo masoivohon'ny fahasalamana tao Etazonia sy ny tafika hifehezana ny fianahany. Any am-piadohan'ny sarimihetsika, noravan'ireo miaramila amerikàna roa ny tanàna afrikana iray nahitàna ilay tsimok'aretina, mba hanafenana ny fisian'ilay bibikely mahafaty. Ny daroka baomba no nampiasaina ho fampidirana ny sarimihetsika, saingy nikisaka niala an'ilay tanibe ny zava-misy taorian'io, ary tsy nisy afa-tsy akom-pahatsiarovana sisa ireo fahavoazana tao an-tanàna.
Ireo fahafatesana Afrikàna tahaka ny andiam-pahatsiarovana manjavozavo sisa dia lohahevitra miverimberina ao anatin'ireo sarimihetsika marobe vokatra tao Hollywood. Asehon'ny Aterineto Movie Database fa manodidina ny 1.367 ny isan'ireo sarimihetsika miresaka ny tanibe afrikana. Ao anatin'ireo efatra tena malaza indrindra, firenena afrikàna iray ravan'ny herisetra no ampiasaina ho fehizoro hahafahan'ny tandrefana iray mikaroka ny fanavotana: ”Blood Diamond”, “Les Larmes du Soleil”, Lord of War” sy ny “Le Dernier Roi d'Écosse.” Ao anatina sarimihetsika telo hafa malaza, aseho ho toy ny olona tsy mahatsiaro tena akory hoe iharanà andrana ara-pahasalamana na loza ara-pahasalamana maro ireo Afrikàna: “The Constant Gardener”, “Outbreak”, sy ny “Sahara.” Ary tsy azo adinoina ny mitanisa an'ireo zava-misy tsy mifanaraka amin'ny fahamarinana hita ao anatin'ireo sarimihetsika, toa ny: I Dream of Africa,” “Dark of the Sun” sy ilay tantara telo mitohy miresaka an'i “Madagascar.”
Raha azo antoka hoe nanitatra ny fijeriny ny tanibe afrikana i Hollywood nanomboka tamin'ilay sarimihetsika tamin'ny taona 1988, “Un Prince à New York” niaraka tamin'i Eddie Murphy, dia tena tsy fahita firy ny fanaovan'ireo mpanatontosa ao Hollywood fijery manakaiky ny endrika tena izy amin'ilay tanibe. Toy ny ady ataon'ny mpilalao sarimihetsika Ben Affleck , sahala amin'ny toa vitsy ny mpamokatra sarimihetsika hollywood no liana amin'ny hevitra hoe hanao sarimihetsika iray mikasika ny tanibe afrikana. Tsy tokony hadinoina fa i Hollywood dia tomponandraikitra foana amin'ny endrik'izao tontolo izao jerena avy avy amin'ny fijery tandrefana.
Fiafaran'ny ‘Ivon'ireo Haizimpito'?
Nifarana ny fotoana izay nilazàna ilay tanibe ho ‘Ivon'ireo Haizimpito’, nefa mipetraka hatrany eo ambonin'ireo sarimihetsika vokatra vao haingana ny fahatsapana amin'ny ankapobeny hoe toerana iray tsy azo antoka ilay tanibe. Mbola ho hita eo izay ho vokatr'io fijery io eo amin'ny lafiny ara-toekarena sy ireo fifandraisana iraisam-pirenena. Saingy ilaina ny manontany, noho ny tahotra ny viriosy Ébola mety hofoanan'ireo orinasa mpitatitra an'habakabaka haingana ve ireo sidina  raha toa ka tany amin'ny tanibe hafa io nitranga? Ary vokatry ny tahotra ny viriosy ve ny fanapahankevitra hanafoana ny sidin'ny ekipa Basket Amerikàna ho any Sénégal?  – nefa toa tsy tratran'ny viriosy i Sénégal – fa noho ny fiparitahana fotsiny na ireo ahiahy amin'ny ankapobeny mikasika ny fahasalamam-bahoaka ao amin'ny tanibe manontolo?
Tsy midika akory izany hoe tsy tokony ho raisina tena matotra ny resaka Ébola. Tena marina ny zava-misy ary tena miha-mampiahiahy hatrany, miaraka amin'ny fanambaràn'ny filoham-panjakana Libiàna Ellen Johnson-Sirleaf fa ny É bola dia raharaha maika eo amin'ny firenena ary tokony hampitombo avo roa heny ny ezaka ataony mba hahatsapana ny ho fisorohana aminy  ireo firenana manodidina toa an'i Côte d'Ivoire. Nefa ny fitantarana mikasika an'i Afrika mankafy hatrany an'ireo fihetsika tahaka an'ireo voalaza amin'ity bitsika nalefan'ny The Economist ity:
The spread of Ebola in west Africa is deeply troubling for the region and the world http://t.co/UHKMdoyzt1  pic.twitter.com/8XYrJFPlUp 
— The Economist (@TheEconomist) August 17, 2014 
Ho an'ny faritra sy manerantany, tena mampiahiahy ny fihanaky ny viriosy ebola ao Afrika andrefana.
Ireo bitsika sahala amin'ny an'i Jina Moore:
The more time I spend in #Liberia , the more I see #Ebola ‘s secret weapon: Our innate instinct to show our love w/ touch, compassion & care.
— @itsjina (@itsjina) August 17, 2014 
Arakaraka ny ijanonako ela ao Libéria, no ahitako ilay fiadiana miafina “ébola”: ny filànay hatrany am-bohoka mampiseho ny fihetsika voajanahary ao amintsika hampiseho am-pisainana tsara ny fitiavana, fangorahana ary fitandremana.
Mitovy hevitra amin'ny bitsik'i Jian Moore i Saverio Bellizzi, mpitsabo aretin-koditra avy ao amin'ny MpitsaboTsy Voafetran-tSisintany ao Guinée:
Tao Télimélé, ao Ginea, nahavita nampidina ny taham-pahafatesana hatramin'ny 25% izahay, noho ny fifandraisana fitokisana misy aminay sy ireo fifanakalozan-kevitray niaraka tamin'ireo vondrom-piarahamonina teo an-toerana. 48ora taorian'ny fiparitahan'ireo soritr'aretina , nanatona anay ny mponina ary afaka nanolotra ny tohana tsara indrindra ho azy ireo izahay.
Manan-danja ny fahitàna satria tamin'ny farany, mifanohitra amin'ny fanjerena baomba mba hisakanana viriosy, tahaka izay asehon'ny sarimihetsika “Alerte”, ny fomba tena mahomby indrindra ao anatin'ny tontolo tena izy mba hisakanana ny fihanaky ny aretina dia mety “ho ny fananana bebe kokoa arotanana sy ireo fanjaitra azo antoka” tsotra fotsiny izao .
Eo am-pikarohana mpiara-miasa, tsy mpamonjy
Fitantarana iray hafa manerana an'i Hollywood dia ilay mikasika an'i Afrika ravan'ireo fifandonana. Raha tao amin'ilay tanibe, nitombo tao anatin'ireo taona vitsivitsy  ny herisetra, nanana tombony ny mpitsidika iray tafalatsaka tanaty fifandonana tany amina faritra iray, na iza io na aiza, tahaka izay asehon’ity sarintanin'ireo toerana itrangan'ireo fifandonana mitàm-piadiana manerantany  ity:
Sarintany misy an'ireo toerana ahitana fifandonana mitàm-piadiana maneran-tany, nataon'ny Lencer – CC BY-SA 3.0
Ny sarimihetsika “Tears of the Sun” dia mampiseho firenena afrikana iray, izay hatry ny fahagola no niaina herisetra, izay ahitàna ireo Tandrefana miezaka mamonjy aina. Ao anatin'ny iray amin'ireo ampahany, i Lieutenant A.K Waters, lalaovin'i Bruce Willis, miteny fa :
Noresena lahatra mafy izahay mba hanolotra an'i Arthur, sy handao an'ireo mpitsoaponenana any anaty ala. Lazaiko aminareo avy hatrany fa: tsy hanao izany aho. Adinoko ny fitsipiko manokana. Manomboka mirotsaka an-tsehatra aho.
Henjana ny fanakianana sehatra iray izay ahitana olona iray manapa-kevitra hamonjy olona hafa iray, saingy eto ny fihetsehampo manjaka ao anaty dia ny famoizampo ho an'ireo mpitsoaponenana afrikana mangetaheta fatratra ny famonjen'ny fotsy hoditra iray. Ny olana dia, tsy mitondra vokatra tsara ho an'i Afrika ny fitsabahana ataon'ireo tafika Tandrefana. Vao haingana i Libia no nahafantatra an'io ary dia rotidrotika. Mbola tena tsy milamina i Mali, ary anjatony ireo olona maty ao Afrika Afovoany, na eo aza ny fanohanan'ny tafika Frantsay.
Ilaina ao Hollywood ny fomba hafa iray vaovao hanehoana an'i Afrika. Hita tokoa fa tena maneho ny zavamisy mitranga tsy ela akory ao Afrika ny ‘Invictus’, iray amin'ireo sarimihetsika tena ankafizina, izay tsy ahitàna na kely monja aza ny fidiran'ny avy any ivelany. Ny Invictus dia tantara taorianan'ny Apartheid, rehefa lasa firenena iray tena nitambatra i Afrika Atsimo. Rehefa nodinihina tsara, ny tononkalo izay nisintonana ny lohatenin'ilay sarimihetsika, dia milaza amin-kery fa :
Na toa inona na toa inona fahateren'ny vavahady,
Na feno an'ireo sazy aza ilay hodibiby fampitan-kafatra
Izaho no mpifehy ny anjarako
Izaho no kapitenin'ny fanahiko.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/12/17/131515/
 aretina Ebola tao Afrika Andrefana: http://www.msf.org.uk/article/ebola-international-response-ebola-epidemic-dangerously-inadequate
 olona miisa 712 farahakeliny hatramin'izao: http://www.afro.who.int/en/clusters-a-programmes/dpc/epidemic-a-pandemic-alert-and-response/outbreak-news/4256-ebola-virus-disease-west-africa-15-august-2014.html
 ny ady ataon'ny mpilalao sarimihetsika Ben Affleck: http://www.cameroonvoice.com/news/article-news-2673.html
 mety hofoanan'ireo orinasa mpitatitra an'habakabaka haingana ve ireo sidina: http://money.cnn.com/2014/08/06/news/companies/airlines-ebola-africa/
 fanapahankevitra hanafoana ny sidin'ny ekipa Basket Amerikàna ho any Sénégal?: http://www.usatoday.com/story/sports/nba/2014/08/15/usa-basketball-scraps-senegal-trip/14137413/
 tokony hampitombo avo roa heny ny ezaka ataony mba hahatsapana ny ho fisorohana aminy: http://www.ipsnews.net/2014/08/cote-divoire-steps-up-public-education-to-keep-ebola-count-at-zero-amid-west-africas-worst-outbreak/
 August 17, 2014: https://twitter.com/TheEconomist/statuses/500945174626054144
 August 17, 2014: https://twitter.com/itsjina/statuses/501022601670832128
 Mitovy hevitra amin'ny bitsik'i Jian Moore : http://allafrica.com/stories/201408180876.html
 nitombo tao anatin'ireo taona vitsivitsy: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wars_2011%E2%80%93present
 ity sarintanin'ireo toerana itrangan'ireo fifandonana mitàm-piadiana manerantany: http://www.cfr.org/global/global-conflict-tracker/p32137#!/
 miteny fa: http://www.imdb.com/title/tt0314353/quotes?item=qt0164279
 amin-kery fa: http://en.wikipedia.org/wiki/Invictus